Avoid eVasion Jailbreak Tools for Time Being (24/12/2013)
Jailbreak Evasion﻿ က ထုတ်လိုက်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ထောင်ဖောက်ဆော့ဝဲမှာ တရုတ် apps store တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Taig ဆိုတာ ပါလာပါတယ်။
တရုတ်ပြည်က ထောင်ဖောက်တဲ့ အိုင်ဖုန်းသမားတွေစက်ထဲကို အဲဒီ apps က အော်တို ဝင်သွားတာပါ...။
လောလောဆယ်တော့ တရုတ်ပြည်က အိုင်ဖုန်းနဲ့ တရုတ်ဘာသာ သုံးနေတဲ့ အိုင်ဖုန်းတွေမှာ affect ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။
ပြဿနာက... အဲဒီ ထောင်ဖောက်ထားတဲ့ဟာက ယူဆာဒေတာတွေကို တရုတ်ဆာဗာဆီ ပြန်ပို့နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေတာပါပဲ...။
တရုတ်ဖိုရမ်တွေဆီမှာ ဒေါသထွက်နေတဲ့ အိုင်ဖုန်းသမားတွေ ပြည့်နေပါတယ်။
ထောင်ဖောက်ဆော့ဝဲရေးသူ Planetbeing﻿ ကတော့ ဒီကိစ္စက တရုတ်ပြည်က ဖုန်းတွေမှာသာ ဖြစ်နေပြီး ပြင်ပက ဖုန်းတွေမှာ မဖြစ်ဘူးလို့ Reddit မှာ ရှင်းပြထားပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သိရတာကတော့ Planetbeing ပါဝင်တဲ့ ထောင်ဖောက်အဖွဲ့ Evasion ဟာ သူတို့ ဆော့ဝဲ မထုတ်ခင်... Cydia﻿ ပိုင်ရှင် Saurik﻿ က တစ်ခြား အဖွဲ့နဲ့ ပေါင်းပြီး သူ့ကိုယ်ပိုင် ထောင်ဖောက်ဆော့ဝဲကို ထုတ်တော့မှာမို့လို့ planetbeing က လက်ဦးမှု ရယူပြီး eVasion ကို ထုတ်လိုက်တာ ဆိုပါတယ်။
ထူးခြားတာကတော့ eVasion အဖွဲ့သားများက တရုတ်ပြည်မှာ Pirate software ဖြန့်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ TaiG ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး TaiG apps store ကို eVasion ထောင်ဖောက်ဆော့ဝဲသုံးတဲ့သူတွေဖုန်းထဲကို အော်တို သွင်းလိုက်တာပါပဲ...။
အကျိုးအမြတ်အနေနဲ့ ဒေါ်လာ တစ်သန်း ရသွားတယ်လို့ ကြားနေရပါတယ်။
လောလောဆယ်တော့ Developer အများစုကတော့ ဒီ eVasion ထောင်ဖောက်ဆော့ဝဲကို လက်ရှောင်ထားဖို့ အကြံပေးနေကြပါတယ်။
ထောင်ဖောက်ထားသူများ Fresh Restore ပြန်လုပ်သင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တော့ အခြေအနေကို စောင့်နေပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:51 AM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: apple, cydia, evasion, iOS, iOS 7, iPhone, jailbreak, p0d2g, planetbeing, saurik
ကိုယ့်ဘေးနားမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေပေးတဲ့ ချစ်သူလေးကို တစ်သက်လုံး ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ။
တစ်သက်လုံး အေးအတူ ပူအမျှ ချစ်သွားမယ်နော်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:30 PM3ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးတာတွေ ပြောပြချင်ပါတယ်။
မှားနေရင်လည်း သိတဲ့သူများ ဝင်ပြောပေးကြပါ...။
ယောက်ျားလေးတွေ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ရင် မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးနဲ့ ရိတ်တာ များပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးတွေ သုံးပါတယ်။ ဘလိတ်သွား နှစ်ခု သုံးခု ပါတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးအစားတွေ။
တစ်လောက အသည်းလေးက စက်နဲ့ ရိတ်တဲ့ ရိတ်စက် မသုံးဘူးလားလို့ မေးတယ်။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ စာလေး မှတ်မိသွားတယ်။
သုတစွယ်စုံလား သိပ္ပံမဂ္ဂဇင်းလားတော့ မသိဘူး။
စာခေါင်းစဉ်က အသံတိတ် လူသတ်သမားတဲ့။
မုတ်ဆိတ်ရိတ်ဓါးနဲ့ မုတ်ဆိတ်တွေ ရိတ်နေရင်းနဲ့ ကိုယ့်အသားအပေါ်ယံလွှာကိုပါ ရိတ်နေသလို ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ကြာလာရင် အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့။
အဲဒါလေးပဲ မှတ်မိတော့တယ်။ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကာကွယ်မယ်ဆိုတာ ရေးထားလား ရေးမထားလား မမှတ်မိတော့ဘူး။
နောက်တစ်ခုက မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများဆီက ကြားဖူးတာ။
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့လေ။ သူ့ယာကျာ်းက အရှက်သည်းတယ်။
ဝမ်းသွားရင် ကြာတယ်။ ဝမ်းချုပ်တတ်တဲ့ အကျင့် ရှိတယ် ထင်ပါတယ်။
အဲဒါ နေလာတာ.. သားသမီး ပွားစီးပြီး ငါးနှစ်လောက်လဲ ရောက်တော့ လိပ်ခေါင်း ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီး ခွဲဖြတ်လိုက်ရတယ်။ နောက်မှ သိတာက စအို ကင်ဆာတဲ့။
ခွဲပြီးနောက်ပိုင်း လူကောင်းသူကောင်းရယ် မဖြစ်တော့ပဲနဲ့ ဆုံးသွားရှာတယ်။
အခုလဲ တစ်ယောက်က လာပြလို့ ယူထုလင့်ခ်တစ်ခု တွေ့လိုက်ရတယ်။
ယောက်ျားသားများမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဝှေးစေ့ ကင်ဆာတဲ့...။
မဖြစ်ခင် ကြိုသိရင် ကာကွယ်နိုင်တယ်တဲ့...။
ကိုယ်တိုင် လက်နဲ့ စမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်မဖြစ် သိရှိနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အောက်က ကော်မန့်တွေမှာတော့ ကောင်လေးတစ်ယောက် အဲဒီ ယူထုကို ကြည့်ပြီး စမ်းလိုက်တာ သံသယ ရှိလို့ ဆရာဝန် သွားပြတော့ ပထမဆုံး အဆင့် ဖြစ်နေတာတဲ့..။ အဲဒါနဲ့ ကုလိုက်တာ ပျောက်သွားပြီတဲ့။
ကိုယ်တိုင် စမ်းပြီး ဘာကို တွေ့မှ ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိပ်တော့ နားမလည်ဘူး။ ဆရာဝန်ဆီ ပြမှပဲ သိမယ် ထင်ပါ့။
(ဗီဒီယိုကတော့ မဆိုစလောက်လေး ကြမ်းမယ်။ ၁၈+ လို့ ခပ်ပါးပါး တပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ။)
ရေးသားသူ Ko Boyz at 2:40 PM 1 ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
The Moments (01)
ရယ်စရာလေး တစ်ခု ပြောရဦးမယ်...။
အသည်းလေးကို မြန်မာပြည်ပြန် ဆွေပြမျိုးပြ အလည်သွားတုန်းကပေါ့။
အမျိုးတွေဆီ သွားလည်ကြတာ သူ့ကို နောက်ကနေတင်ပြီး ကျွန်တော်က ဆိုင်ကယ် မောင်းသွားတယ်။
သူက ဆိုင်ကယ် အဆင်းအတက် သိပ်မကျွမ်းဘူး...။
နောက်ကနေ ခွထိုင်.. ကျွန်တော့်ခါးကို ဖက်. အဲလို စီးတာပေါ့လေ..။
မြို့ပြင်ထွက်လည်ရင်း လမ်းမှာ ဓါတ်ဆီဆိုင်မှာ ရပ်ပြီးဆီထည့်တာ...။
ဆီဖြည့်ပြီးတော့ ပိုက်ဆံရှင်းပြီး မောင်းထွက်လာတာပေါ့။
အထွက်မှာ သူတက်လာလား တက်မလာဘူးလား သတိမထားပဲ ဆက်မောင်းထွက်လာတာ...။
ဘယ့်နှယ် ငါ့ခါးလဲ လာမဖက်ဘူး...။
မစီးတတ်ဘူးလဲ ပြောသေးတယ်.. တော်ကြာနေ ပြုတ်ကျနေမှ ဆိုပြီး လှည့်ကြည့်လိုက်တာ သူက ဆိုင်မှာ ကျန်ခဲ့တာဗျ...။
ဆိုင်ကယ်ကို သူက တစ်ခါမှ မစီးဖူးတော့ အတက် အဆင်း မကျွမ်းတာ မေ့သွားတယ်။
အဲ့တုန်းက သူ့ခမျာ ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ကျန်နေခဲ့တာ...
ရယ်လဲ ရယ်ချင် သနားလဲ သနားသွားတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 4:16 PM5ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
ကိုယ့်ဗားရှင်းနဲ့ကိုယ် ပြန်တင်ထားတာကို ဒီနှစ် 2013 အတာနှစ်ကူး အကြိုအနေနဲ့ ဆားချက်လိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:33 PM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: Happy new year, Myanmar, new year, သင်္ကြန်
ငါ သိကြား မဟုတ်။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 6:26 PM6ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
The following article is copied from Htet San Wordpress post. It reflects most of Myanmar people.
I read an opinion piece on Aljazeera article today. It’s very amusing to see how the writer judged on Burma based on peoples’ angry comments on Facebook that makes me want to question him. How would you react first if your mother was stabbed on her back? How did the whole world react first when World Trade Center crashed down? The sudden furious state of mind in respond to the news of their relatives and friends’ getting hurt doesn’t mean Burmese as racists and Burma asaracist country. At least, we are not invading other countries and declaringawar. We are protecting our people. If you are not familiar with the law of religion freedom in Burma , welcome to our country.
ရေးသားသူ Ko Boyz at 1:29 AM2ယောက်က ရေးချင်တာတွေ ရေးခဲ့တယ်...။
Labels: BBC, Burma, CNA, CNN, DVB, Media, Muslim, Myanmar, New York Times, NYT, Rakhine, RFA, Rohingya, Rohwenger, Straits Times, VOA
Avoid eVasion Jailbreak Tools for Time Being (24/1...